आगलागी हुन नदिन के गर्ने ? - Khula Patra
आगलागी हुन नदिन के गर्ने ?
प्रकाशित समय: १८:५३:४३
सुनसरीको बाराहक्षेत्र नगरपालिका ११ को मधुबनको सरदार बस्तीमा अघिल्लो हप्ता भएको आगलागीमा ४७ परिवारका ७० छाप्रा र टहरा जले । एक करोड ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षती भयो । पीडितको अझै बिचल्ली छ ।
गएको फागुन ५ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १२ लगनमा आगलागी हुँदा काभ्रेका ६५ वर्षीय जीवनकुमार श्रेष्ठको ज्यान गयो । प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार घरमा विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको थियो ।
फागुन १४ गते पुतलीसडकमा रहेको शेयर मार्केटमा आगलागी भयो । भवनमा राखिएको ग्याँस सिलिन्डरबाट आगो सल्किएको भएको प्रहरीको भनाई छ ।
यस्तै, चैत ७ गते सुन्धारामा मिठाई पसलमा आगलागी भयो । आगलागीमा परी २ जना घाएते भए । उनीहरुको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हो ।
आगलागीबाट बच्ने उपाय :
आफू बस्ने कोठा नजिकै फायर फाइटर राख्ने,
आफ्नो घर वरपरको फोहोर जलाउँदा विशेष ध्यान दिने,
विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिसकेपछि राम्रोसँग बन्द गर्ने,
अनावश्यक रुपमा विद्युतीय उपकरण नचलाउने,
आगो सल्किने सामानहरु बालबालिकाको पहुँचबाट टाढा राख्ने,
आगो लागिहाल्यो भने तत्काल नियन्त्रकलाई सम्पर्क गर्ने,
प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक सामग्री राख्ने ।